I-Otter Ski/Hamba uye e-Village/Umbhede othokomele ongu-2/Ubhavu wamanzi ashisayo - I-Airbnb
I-Otter Ski/Hamba uye e-Village/Umbhede othokomele ongu-2/Ubhavu wamanzi ashisayo
Indawo engcono kakhulu, ngokuqondile edolobhaneni! Ibiyiklabhu ye-Otter Ski, ibuyiselwe ngezinto zokulala namashidi athokomele. Isinyathelo sokuya ezindaweni zokudlela, i-North Conway CC, i-Village Green, isiteshi sesitimela esihle, izitolo zekhofi, izitolo, ukushushuluza eqhweni, nokuzijabulisa kwasebusuku. Ngincamela ukubhukha indlu yonke futhi ngisebenzisa kuphela indawo enamakamelo okulala angu-2 ukugcwalisa izindawo ezivulekile. Hamba ngesikebhe ku-Saco, amapaki okuzijabulisa, ukushushuluza eqhweni, izindaba zezwe, ukuhamba ngezinyawo, njll. FUNDA MAYELANA nendawo- kungase kube nezinye izivakashi ngakolunye uhlangothi lwekhaya. IZILWANE EZIFUYWAYO ZIDINGA IMVUME YANGAPHAMBILINI
SICELA UNGABHUKHI AMAHOLIDE/IZIMPELASONTO EZINGAPHEZU KWAMAVIKI AMABILI KUSENGAPHAMBILI.
NGISEBENZISA LE NDLU UKUGCWALISA IZIKHALA njengoba leli ikamelo elingu-2 engingakwazi ukukhiya endlini enkudlwana enamakamelo okulala angu-8. Ngizama ukubhukha indlu yonke kuqala futhi nginikeza kuphela amakamelo okulala angu-2 ukuze ngigcwalise izikhathi ezitholakalayo ikakhulukazi phakathi neviki. Uzoba nendawo yakho yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, ikhishi elinakho konke, ubhavu, indawo yokudlela, ilondolo.
UNGASE ube nokufinyelela OKUHLANGANYELWAYO egcekeni, emgodini womlilo, ubhavu wamanzi ashisayo namatafula epikiniki/uvulande uma elinye ikamelo lokulala elingu-1 elinendawo yokungena ehlukile nendawo okungeyakho iqashwa ngesikhathi esifanayo.
Azikho IZIVAKASHI EZENGEZIWE, IMICIMBI, IZILWANE EZIFUYWAYO EZIDINGA IMVUME YOKUQALA
Sibheke phambili ekubungazeni nasekwenzeni konke okusemandleni ethu ukunciphisa ukubhebhetheka kwe-COVID 19. Ngaphezu kokuhlangabezana nemigomo yokuhlanza eyengeziwe uhulumeni ucele isivakashi ukuthi sinikeze amadokhumenti athile ngaphambi kokuhlala.
Isakhamuzi se-NH kufanele sinikeze umazisi we-NH.
Izivakashi ezingaphandle kwesifunda kudingeka:
1.	Ukufakazela ukuthi wonke umuntu(abantu) ohlala ekhaya okungenani izinsuku ezingu-14 ngaphambi kokufika e-New Hampshire, ukuphuma kuphela ukuze uthole izinto ezibalulekile nalapho ungaphandle kwekhaya ukugcina ukuqhelelana komphakathi nokugqoka izifonyo zobuso uma kungaphansi kwamamitha angu-6 omunye umuntu phakathi nalolu suku "lokuhlukaniswa wedwana".
2.	Uzolandela imihlahlandlela ye-State & CDC phakathi nokuhlala kwakho, gqoka i-LongE efanele, ukuqhelelana komphakathi, njll.
ZONKE IZIVAKASHI EZINGENA KUFANELE ZIPHENDULE LE MIBUZO.
1.	Ingabe wena noma yiliphi ilungu leqembu lakho nisondelene ngokuseduze nesimo esiqinisekisiwe se-COVID-19?
2.	Ingabe ubhekene nokuphefumula, ukunqamuka kokuphefumula noma ukuphefumula?
3.	Uke waba nemfiva emahoreni angu-48 edlule?
4.	Uke waba nezinguquko emqondweni wakho wokunambitha noma wokuphunga?
Uma uphendule yebo kunoma yimiphi yale mibuzo, sicela ungabeki abaqaphi bethu bezindlu, izivakashi zamanje nezizayo engozini futhi ubuye lapho uzizwa kangcono.
4.84 · 197 okushiwo abanye
Ngokuqondile edolobhaneni nebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya esitolo, ezitolo, ezindaweni zokudlela, u-ayisikhilimu, njll.
Uzoba nendawo yakho yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela. Uma olunye uhlangothi lwendlu luqashiwe kungase kudingeke wabelane ngomgodi womlilo. Indawo yokuhlala yangaphandle nendawo yobhavu wamanzi ashisayo. Uzoba nendawo yakho yokosa inyama yangaphandle kanye nendawo yokuhlala
Uzoba nendawo yakho yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela. Uma olunye uhlangothi lwendlu luqashiwe kungase kudingeke wabelane ngomgodi womlilo. Indawo yokuhlala yangaphandle nenda…